Ogaden News Agency (ONA) – Ciidamada OLF oo Addis Ababa ku weeraray Woyanaha askar badana ka dilay
Ciidamada OLF oo Addis Ababa ku weeraray Woyanaha askar badana ka dilay
Addis Ababa oo Amaankeedu Faraha kasii baxayo
Jabhada Oromada ee OLF ayaa weeraro isdaba joog ah ku qaaday Ciidamada Woyanaha ee kusugan Gobolka shoa ee casimadiisu tahay Addis Ababa. Sida ay soo saartay saxaafada ku hadasha codka Jabhada Oromiya ayaa lagu sheegay in daggaal ay ciidamada OLF ku qaaden ciidamada Woyanuhu uu ahaa daggaal qorsheysnaa iyo dabin loo dhigay ciidamada tabarta daran ee Woyanaha. Waxaa la sheegay in ciidamada taliska TPLF loo beenguuray oo lasiyay xog been aheyd iyada oo lagu yiri ciidamo OLF ah ayaa halkaas jooga markaasna ay damceen in si gaadmo ah ciidamada Jabhada Oromada loo weeraro. Jabhada OLF ayaa sheegtay inay kawarheysay qorshahan oo ahaa mid Shacabka Oromiya si buuxda uga qeyb qaatay.
Waxaa hadaba lagaga dilay tiro inta lahubo 7 askari oo woyane ah halka uudhawacu ahaa 4 kale. Dagaalkan ayaa ka dhacay gobolka shoa tuulada Kuyyu.
Sidoo kale waxaa isla magalada Addis Ababa lagu qaaday daggaal lagu argagaxiyay ciidamada tigreega oo eega moraalki ka jabay markii lashegay xaalada Zenawi ku suganyahay ee dhimasho iyo nolol midna lagu xaqiijinin wali.
Waxaa hadaba Caasimada Addis ababa lagaga dilay 2 askari halka midkalena lagaga dhaawacay. Daggaalkan ayaa ka dhacay qabaleega Gullale oo ka tirsan qabaleega 3aad ee caasimada Addis Ababa.
Waxaa waayadan danbe soo badanaya daggaalada lagu qaadayo Ciidamada Woyanaha oo kasocda guud ahaanba dhamaan xeryaha ay Ciidamada Tigreegu dhufeyska iyo gabashada kaga jiraan.
Amaandarada Addis Ababa Kajirta ayaa warar maanta lasoo shaaciyay waxaa lagu sheegay in Tigree badan oo Addis Ababa ku nool ay dibadaha u fakadeen. Dadka fakaday ayaa waxa ku jira Dirawalkii xaaska Males Zenawi oo la sheegay innu wadanka ka fakaday.